अस्पताल - Khabarshala अस्पताल - Khabarshala
म अस्पतालमा थिएँ । अस्पतालमा हुने गतिविधि, कुराकानी नियाल्दै थिएँ । कोही उपचारमा भएका गल्तीका कुरा सुनाउँदै थिए । कोही अस्पतालमा बस्नुको दिग्दारी । कहिलेकाहीँ यहाँ झगडा पर्छ, कहिले चाँडै कुरा मिल्छ, कहिले लम्बिन्छ । फेरि कुरा सल्टाइन्छ र पूर्ववत् कामकुरा चलिरहन्छ ।
‘महँगो उपचार रहेछ । म त आत्तिएँ जेठा । उपचार नगरी पनि भएन । के गर्नु ?’ म बसेको छेउमा पुरानो लवेदा, सुरवाल, टोपी र मैलो इस्टकोट लगाएका वृद्ध गुनासो गर्दै थिए ।
‘डाक्टर अनुभवी छैनन् पिजी र विद्यार्थीले उपचार गरिदिन्छन् अनि कहाँ राम्रो उपचार हुन्छ ? लापरवाही भैहाल्छ नि!’ अर्काले थपे ।ुुु
यी कुरा सुन्दै गर्दा कोही भने सन्चो भएर फर्किरहेका थिए । तिनको अनुहार निकै हँसिलो देखिन्थ्यो । मनमा लागेको हुँदो हो अब कहिल्यै अस्पताल बस्न नपरोस् ।
प्रसूति कक्षको बाहिर भित्र ओहोरदोहोर गरिरहेकी थिएँ । मुनालाई भर्ना गरेकी थिएँ । मुना र मेरो माइती गुल्मी थियो । उनको घर दैलेखमा छ । मेरो भने कोहलपुर । गर्भवती भएपछि उनले दैलेखको सरकारी अस्पतालमा चेक जाँच गराएकी थिइन् । ‘नानी तिम्रो बच्चा उल्टो छ, गाह्रै हुन्छ होला !’ अन्तिम समयमा डाक्टर स्वेताको बोली सँगसँगै मुना निकै डराएकी थिइन् ।
‘दिदी मलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छन् डाक्टरहरु,’ केही दिनअघि मुनाले मलाई फोन गरेकी थिइन् ।
‘बच्चाको हेड हाई छ रे!’
‘नडराऊ, केही हुँदैन । अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्ने भयो ।’
‘बच्चा निकाल्ने अपरेसन कहाँ गाह्रो हुन्छ र ?’ मैले ढाडस दिँदै भनेकी थिएँ ।
‘मलाई त निकै डर लागिरहेको छ,’ उनको काँतर स्वर मैले फोनमा स्पष्ट अनुभव गरेकी थिएँ ।
‘बजारका महिलाहरु आजकल डेट आउनुअघि नै अपरेसन गरिहाल्छन् । व्यथा सहन त झनै गाहृो हुन्छ नि !’ मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ ।
‘अपरेसन कहाँ गर्ने होला दिदी ? यतै गरुँ कि ?’ उनले सोधेकी थिइन् ।
‘अस्पताल र डाक्टर राम्रो हुनुपर्छ नि !’
‘खै दिदी, जिल्ला अस्पताल हो, के राम्रा डाक्टर होलान् र ?’
‘त्यसो भए यतै आऊ न त,’ उनको कुरा बुझेर मैले कोहलपुरतिरै बोलाएकी थिएँ ।
पहाडमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल थिएनन् । उनका नजिकका अरु आफन्तहरु कोहलपुरमा थिएनन् । माइतीको कुकुर त प्यारो हुन्छ भनिन्छ, उनी त झन् मेरी छिमेकी बहिनी । त्यसैले उनलाई यतै बोलाएकी थिएँ ।
उनी एक्लै आइन् । लिएर आउने जस्तो घरमा आफन्त पनि कोही नभएरै होला सायद । अस्पतालमा एकल अभिभावक बन्दै थिएँ म । डाक्टर लीलाको सल्लाहबमोजिम आज उनको अपरेसन हुँदै थियो ।
म जस्ता सयौं बिरामीका आफन्तहरु ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए, सायद सबैलाई हतार हुँदो हो । बेचैनी हुँदो हो मलाई जस्तै । नर्सले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै थिइन् । लेबर रुममा रहेका लगभग सबै बेडमा लस्करै गर्भवती महिलाहरु थिए । कोही उमेरले पचास नाघेजस्ता र कोही कलिला पनि ।
‘लौन डाक्टर मेरो अपरेसन गरिदिनु …..।’
‘मेरो बच्चा भ्याकुम लगाएर निकालिदिनुस् न सिस्टर ….।’
‘ऐया बा…, मरें आमा…, उस्…, अँ…अँ…।’
क्रमैसँग यस्ता आवाज सुनिरहनु पर्थ्यो ।
बच्चाहरु जन्मदै गरेका आवाजहरु पनि सुनिदै थिए ।
मैले सबैको दुःख नियालिरहेकी थिएँ ।
पृथ्वीभित्रको सिंगो सृष्टि सायद त्यही कोठाभित्र थियो । आमा बन्नुको पीडा नियाल्ने पुरुषहरु ढोका वरिपरि थिए । सानो छटपटीमा मलाई प्रशव पीडा भयो भन्ने पुरुषहरुले वास्तविक प्रशव पीडालाई नियालिरहेका थिए । उनीहरुको मन पनि भरिलो थियो । आँखा रसिला थिए । आफ्ना मान्छेको पीडा सुन्न उनीहरुलाई पनि गाहृो भएको हुँदो हो ।
म भित्र बाहिर गरिरहेकी थिएँ । कुनै कुनै बेडमा त रगतको भेल बगिरहेको देखिन्थ्यो । सबै आमाको अनुहारमा अथाह पीडा देखिन्थ्यो । आफू मरेर नयाँ सृष्टि जन्माउन खोज्दै थिए ।
‘तपाई मुनाको मान्छे हो ?’ नर्सले मलाई कोट्याउँदै बोलाइन् ।
‘हजुर हो,’ म अलि अघि सरेँ ।
‘विदेश जानुभएको छ ।’
‘म उनको दिदी ।’
‘त्यसो भए यो कागजमा सही गरीदिनुस् ।’
मेरा हात काँपिरहेका थिए ।
‘बिरामीलाई अपरेसन गर्दा तलमाथि भएमा म आफैँ जिम्मेवार हुनेछु,’ लेखिएको तलपट्टि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । मुनाको अनुहारमा पुलुक्क हेरें । ल्याप्चे लगाएका दुबै बुढी औँलाको मसी सुकेको थिएन । भावुक भइन् उनी । आँखा रसिला थिए । खासमा बेडमा चिच्याएका महिलाहरु देखेर उनको होस उडिसकेको थियो । त्यसैले मानसिक रुपमा अपरेसनका लागि तयार भएकी थिइन् । अब मनको डर मैले पन्छाउनु पर्ने थियो । पछि हटेर हुनेवाला थिएन । आज म उनको एकल अभिभावक थिएँ । यस प्रक्रियामा मलाई सहयोग गर्ने कोही थिएन । एकपटक भगवान सम्झिएँ । सायद अप्ठेरोमा पर्दा सबैले सम्झन्छन् मैले जस्तै । नर्सले मुखमा हेरिरहेकी थिइन् । मेरो अनुहार पढेर होला मलाई सम्झाउँदै भनिन् ।
‘केही हुँदैन, डराउनु पर्दैन ।’
सहीछाप गरिदिएँ । मनमा हुटहुटी चल्दै थियो ।
मुनाको बेड नजिकै एक महिला थिइन् जानकी । जानकीको अवस्थाले मेरो ध्यानाकृष्ट गरिरहेको थियो । उनी बिस्तारामा लडिरहेकी थिइन् । बेलाबेलामा बटारिन्थिन् । अनुहारमा चिटचिट पसिना थियो । अनुहार रातो रातो थियो । नर्सहरुले स्टेथेस्कोप लगाउँदै थिए । ज्वरो नाप्दै थिए । डाक्टर जाने आउने क्रम चलिरहेको थियो । जानकीको अवस्था देखेर मैले मुनाका सबै कुरा बिर्सिएँ । यसो भनूँ, मुनालाई भन्दा म बढी जानकीलाई ध्यान दिइरहेकी थिएँ ।
‘अहिले कस्तो छ दिदी ?’ नर्स र डाक्टरले सोध्थे ।
‘ठिकै छ’ जानकीको जवाफ हुन्थ्यो । तर केही समयपछि अवस्था परिवर्तन भइहाल्यो ।
‘तपाईंको ज्वरो नै घट्दैन । प्रेसर पनि २०० नाघिसकेको छ । खै के गर्ने होला ? दिदी …’ नर्सले काउन्टरतिर फर्केर चिच्याइन् ।
अलि पाकी जस्तो लाग्ने नर्स उनको अगाडि आइन् । ‘तपाईंको अन्तिम महिनावारी कहिले हो दिदी ? डाक्टरले अन्तिम डेट कहिले दिनुभएको थियो ?’
‘एक हप्ता नाघिसक्यो ।’
‘उमेर कति नि ? चालीस वर्ष ।’
‘कतिवटा बच्चा छन् ?
‘बरु बहिनी मलाई जे सुकै होस्, मेरो अपरेसन गरिदिनुस् । कर्ममा भए म पनि बाँचुली, मेरो पेटको सन्तान बाँच्नुपर्छ,’ उनले बोली दबाउँदै बोलिन् । अन्तिम बोली बल्ल बल्ल सुनिएको थियो ।
‘त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? तपाईंको यस्तो अवस्थामा डाक्टर अपरेसन गर्नुहुन्न । आमाको शरीरलाई खतरा हुन्छ,’छेउकी नर्सले सम्झाउने प्रयास गरिरेकी थिइन् ।
यसैबीच डाक्टर लीला पनि आइपुगिन् । नर्ससित जानकीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सोधपुछ गर्दै थिइन् ।
‘पेटको बच्चाले दिशा खायो भने मर्छ भन्छन्, लौन छिटो गरम् नानीहरु,’ बाहिरबाट अन्दाजी ६५ वर्षकी वृद्धा भित्र पसिन् । उनलाई निकै हतार थियो । बच्चा समाउने नयाँ कपडा उनको हातमा थियो । ओल्टाइपल्टाइ हेर्दै थिइन् । उनीहरुका धेरैजसो आफन्तहरु जम्मा भैसकेका थिए ।
डाक्टर लीलाले श्रीमान्लाई बोलाइन् । उनको शरीर मोटो र छोटो कदको थियो । झुस्स दाह्री पालेका थिए । टाउकोको आधा कपाल झरिसकेको थियो भने बचेको कपाल तिलचामले भैसकेको थियो । सेतो हाफ पाइन्ट र रातो टिर्सट लगाएका थिए । अनुहार गम्भीर थियो । डाक्टरसित केहीबेर कुराकानी गरे ।
‘अवस्था निकै जटिल छ के गर्ने ?’ डाक्टरले श्रीमान्को अनुहारतिर हेरेर भनिन् ।
‘छिटो बच्चा जन्माउनका लागि व्यथा बढाउने औषधि चढाउन सकिन्छ तर बच्चालाई अप्ठेरो पनि पर्न सक्छ । कि अपरेसन गर्नुपर्छ तर आमालाई गाह्रै हुनसक्छ ।’
वृद्धा अगाडि सरिन् र डाक्टरतिर फर्केर भनिन्, ‘बच्चालाई खतरा हुन्छ । अपरेसन गर्ने निर्णय त तपाईंले लिने होला नि ? हामी डाक्टर कि तपाईं हँ ?’
‘होइन आमा बिरामीको अवस्था एकदमै जटिल छ । सजिलो भए त बच्चा आफैँ जन्मिहाल्थ्यो नि ? नर्मल अपरेसन भए पनि म गरिहाल्थेँ । तपाईंहरुसँग कहाँ छलफल गर्नु पर्थ्यो र ?’
‘हामीलाई सोधेर, छलफल गरेर समय मात्र किन बर्बाद गर्छौ हँ डाक्टर ? सक्दैनौ भने अन्तै लैजान्छौं,’ वृद्धा च्याँठ्ठिइन् ।
‘जानकीलाई हाई फिवर छ । प्रेसर ओभर छ । नाडी पनि कडा चलिरहेका छन् । हात खुट्टा पूरै सुन्निएर खम्बा बनेका छन् । बच्चाको धड्कन कम सुनिएको छ । ब्लिडिङ पनि भैरहेको छ । अवस्था सबै जटिल छ, के गर्ने के गर्ने ?’ डाक्टरले जानकीतिर फर्केर आफैँसँग बोलेझैँ गरिन् ।
यस्तो बिरामीलाई नर्मल सुत्केरी गराउन सम्भव थिएन । अपरेसन गर्नु पनि सजिलो थिएन । डाक्टर लीलालाई वृद्धाको बोली सुन्दा जानकीलाई निकालिदिऊँ जस्तो पनि नलागेको होइन ।
डाक्टर लीलाले फोन गरेर डाक्टर क्षितिजलाई बोलाइन् । उनीहरु दुवैले एकछिन सल्लाह गरे ।
‘डाक्टर क्षितिज म यो बिरामीको अपरेसन गर्न पनि सकिरहेको छैन । के गर्ने ? आफन्तको बोली सुन्दा राख्न मन पनि छैन । केही भैहाल्यो भने पनि अस्पताललाई मात्र होइन हामीलाई पनि खतरा छ । यही शहरमा बस्नुपर्छ ।’
‘तर अस्पतालबाट निकाल्न पनि त सम्भव छैन । हाम्रो धर्म नै यस्तै अप्ठेरोमा परेकाको सेवा गर्ने नै हो,’ क्षितिजको आवाज सुनियो ।
‘खै आज मलाई कता कता डर लागिरहेको छ । आफ्नो हातले गरेका अनगिन्ती अपरेसनको सम्झना आइरहेको छ । गर्भवती महिलामा केही समस्या देखिनु स्वभाविक हो तर यहाँ त धेरै समस्या छन् । फेरि अहिले नै आफन्तहरु थर्काउन खोज्दैछन् । पछि के होला के ? कि रिफर गरिदिऊँ भेरी अस्पतालमा ?’
‘डाक्टर लीला, हाम्रो धर्म बिरामी बचाउनु हो । उनीहरुलाई जीवनदान दिनु हो । यही हातले छुरी चलाएर अनगिन्ती सपनाहरु जन्माएका छौं हामीले । धेरै बच्चालाई आमा बचाएर दिएका छौं । हाम्रो अगाडि शरण लिन आएकालाई यसो भन्नु हाम्रो धर्मले दिँदैन,’ डाक्टर क्षितिज दार्शनिकझैँ सुनियो यतिबेला ।
‘बूढी आमा धम्कीको भाषा बोल्दैछिन् । मलाई त पठाउँ कि जस्तो लागिरहेको छ अझै पनि,’ डाक्टर लीला चिन्तित सुनिइन् ।
‘होइन डाक्टर, त्यसो गर्नु हुँदैन । हामीलाई पढाउने प्रोफेसरले के भन्नु हुन्थ्यो ? तपाईंलाई अझै सम्झना होला नि ? हातमा अपरेसनको केश आइसकेपछि बिरामी जस्तोसुकै आउन् । भगवान् सम्झेर अपरेसनका लागि जुट्नुपर्छ । शरण गर्नेको मरण गर्नु हुँदैन । पछि जे हुन्छ, हुन्छ । बिरामीलाई नेपालगंज पठाउँदा बीचमा ओभर ब्लिडिङ भएर ज्यान पनि जान सक्छ । हाम्रो आक्रोशको सजाय बिरामीलाई दिनुहुँदैन ।’
वृद्धाले फेरि चर्को स्वरमा बोलिन्, ‘अपरेसनको तयारी गर्नुस् डाक्टर । मेरो नातिलाई केही भैहाल्यो भने …. ?’
छोरालाई कुमले घुच्याइन्, ‘कति हिम्मत नभएको तेरो हँ ? तेरी जोइलाई केही हुँदैन । लामो आयु लिएर आएकी छ । बाँच्छे । बरु बच्चा………….। कागतमा छिटो गर् सिक्नेचर, लेखिदे तेरो नाउँ । छिटो । मेरो नाति चाहियो मलाई ।’
नर्सले कागज अगाडि सारिदिइन्, उनले चुपचाप हस्ताक्षर गरिदिए ।
डाक्टर लीलाले क्षितिजलाई अपरेसन थिएटरमा सँगसँगै जान अनुरोध गरिन् । बिरामीलाई तयार गरी थिएटरमा ल्याउन आदेश दिइन् र आफू अगाडि बढिन् ।
‘तपाईंहरु सबै बाहिर जानुस् । अपरेसन थिएटरतिर संकेत गर्दै नर्स कराइन् । हामी सबै बाहिर निस्कियौं । मुना र जानकी दुवै जनालाई पालैपालो ह्वील चेयरमा राखियो ।
उनीहरु निशब्द थिए । ढोकासम्म सँगसँगै निस्किएँ म ।
‘बेस्ट अफ लक मुना,’ म उनको अनुहारमा हेरेर खिसिक्क हाँसिदिएँ । उनी पनि बाध्यात्मक हाँसो हाँसिन् र भित्र पसिन् । सँगसँगै जानकीलाई पनि भित्र लगियो ।
अपरेसनको बाहिरपट्टि बसेर पर्खनु सिवाय अरु विकल्प थिएन । दोस्रो तलामा रहेको अपरेसन कक्ष भर्याङनजिकै थियो । जानकीका आफन्तहरु थियटरबाहिर भरिँदै थिए । भुइँमा पिफर्म ओछ्याएर बसिरहेका थिए । ठूलो-ठूलो स्वरमा कुरा गरिरहेका थिए । उनीहरुलाई अस्पतालका अन्य बिरामीसँग कुनै सरोकार थिएन । चिच्याएर गफिदै थिए । ओहोरदोहोर गर्नेहरु जो कोही पनि उनीहरुतिर हेरेर फर्किन्थे ।
मेरो वाक्य पूरा हुन नपाउँदै उनी बोलिहालिन् ।
‘जानकी मेरी बुहारी,’ उनको नजर ढोकातिर थियो । उतै फर्केर जवाफ फर्काइन् ।
उनी अगाडि सरिन् ।
उनले हातको नयाँ कपडा नर्सलाई थमाइन् र भनिन्, ‘बच्चा के भयो नानी ? नर्सले सुनिनन् कि सुनेर पनि उत्तर दिइनन् । उनले ढोका बन्द गरिसकेकी थिइन् । आमा फेरि बेन्चमा फर्किन् र मतिर हेरेर भनिन् ।
‘अहिले त डाक्टरले छोरा छ भनेका छन् । लखनऊ जँचाएर आएका ।’
मैले ए मात्र भनेँ । मेरो उनीप्रति चासो कम देखेर होला उनी उठेर आफ्नै भिडमा मिसिइन् । एकैछिन उनै नर्स ढोकामा देखिइन् । वृद्धा नसकेर पनि दौडिन् । बच्चा च्याप्प समातिन् ।
‘के जन्मियो नर्स नानी ? नाति त होला ! ’ नर्सले टाउको मात्र हल्लाइन् । जानकीकी सासू आफन्तहरुको बीचमा छिटोछिटो पुगिन् । ढोकाबाट नर्सले केही भन्न खोज्दै थिइन् तर उनीहरु कसैले ध्यानै दिएनन् । सबै नवजात शिशु वरिपरि गोलो लगाए ।
‘ल बधाइ छ जेठी आमा ! नातिको हजुरआमा भयौ,’ बूढी खुशी देखिइन् ।
‘मैले त भनेको थिएँ नि, कान्छी छोरीको अनुहार छोरा जस्तै छ, अबको पालि नाति नै हुन्छ भनेर !’
‘हात हेर्नेले पनि यसपालि छोरा नै हुन्छ भनेको थियो रे त !’
‘लखनऊ जचाउँदा डाक्टरले पनि छोरै छ भनेको थियो ।’
सबैले पालैपालो नवजातको पुरानो भविष्यवाणी सुनाइरहेका थिए । एकअर्कालाई बधाइ दिँदै अंकमाल गर्दै थिए । हाँसोको फोहरा छुटिरहेको थियो । म घरिघरि ढोकातिर हेर्दै थिएँ भने उनीहरुको खुशीलाई समेत नियालिरहेकी थिएँ ।
एक हातमा मिठाइको प्याकेट र अर्को हातमा प्लाष्टिकको पोको समातेर नानी देखिइन् । अन्दाजी पन्ध्र वर्षकी हुँदिहुन् उनी । बच्चाको मुखमा पुर्लुक्क हेरिन् ।
‘बधाइ छ बाबा,’ उनले अंकमाल गरिन्, ‘तपाईंको सपना पूरा भयो ।’
लड्डु निकालेर बाबुको मुखमा राखिदिइन् । बाबाले छोरीको पछाडि हात राखेर धाप लगाए ।
जेठी छोरी होलिन्, मैले अनुमान लगाएँ । उनको अनुहार गम्भीर थियो । ढोका अगाडि आइन् ।
‘आन्टी कति बेला भेट्न पाइन्छ मम्मीलाई’ म तिर फर्किन् । मलाई पनि कुनै अनुमान थिएन ।
‘अझै एक छिन लाग्ला,’ उनको बेचैनी अनुहारलाई केही ढाडस दिन खोजें । उनी आमाको प्रतीक्षामा उभिइन् ।
हजुरआमा नातिको अनुहार हेर्दै थिइन् । नातिनीतिर हेरेर फतफताइन्, ‘घरमा फोन गरिदे नानी ! खसीको मासु फ्रिजमा छ । बनाउन लगा । ज्वानोको झोल पकाएर ल्याउन पठा । घिउ पनि र्याकमा छ झिक्न पठा । फेरि बच्चालाई दुध आउँदैन ।’
उनको बोलीतिर भन्दा नानीको ध्यान ढोकातिर थियो । अरु कसैले उनको कुरामा वास्ता गरेनन् ।
केही छिनमा उनै नर्स ढोकामा देखिइन् ।
‘मुनाको मान्छे को हुनुहुन्छ ?’
‘म म,’ हातको कपडा नर्सको हातमा थमाइदिएँ ।
नानी केही सोध्न खोज्दै थिई तर नर्सले उत्तर नदिई गइन् । एकैछिनमा नर्सले बच्चा च्यापेर आइन् र मलाई दिइन् । बच्चा समाएँ ।
‘मुनालाई कस्तो छ ? अपरेसन सकियो ? रगत चढाउनु त परेन ? होशमा त छिन् नि ?’ उनले टाउको हल्लाएर मेरा प्रश्नको उत्तर दिइरहेकी थिइन् तर उनका आँखा वृद्ध महिलाको काखतिर थिए । नर्सको अनुहार पनि हँसिलो थिएन । उनको मलिनतामा म डराउँदै थिएँ । मुनाका लागि प्रार्थना गरिरहेकी थिएँ । काखे बच्चालाई स्वागत गर्न पनि बिर्सिएछु । अनुहार हेरेँ । अबोध परीले टुलुटुलु हेरिरहेकी थिइन् । मेरो त मिठाइ पार्टी गर्ने पनि कोही थिएनन् । बच्चालाई स्वागत गर्न पनि एक्लै थिएँ म ।
मुनाको मोबाइल बज्यो । ज्वाइँसाबको फोन थियो । मैले उठाएँ ।
‘लक्ष्मी भित्रिइन् बधाइ छ ज्वाइसाब्,’ मैले नसोधिकनै उत्तर दिएँ ।
‘ठ्याक्कै तपाइँजस्तै,’ त्यसो भन्दै गर्दा म पनि मुस्कुराएँ । भर्खरै जन्मिएकी सानीको अनुहार खै कसरी तुलना गरिदिएँ ! फोन राखेँ र मुनाको प्रतीक्षा गरिरहेँ ।
जानकीका आफन्त बढ्दै थिए । उपाहार बोक्नेहरुको पनि कमी थिएन । खुसियाली थपिंदै थियो ।
नर्सहरु पालैपालो बाहिर निस्किदै थिए । ‘मुनाको अपरेसन सकियो ?’ नर्सको नजिकै पुगेर सोधेँ । उनी नबोली अगाडि बढ्न खोजिन् । मैले उनको हात च्याप्पै समाएँ ।
‘सकियो । पोष्टअपमा सिफ्ट भैसक्यो । एकछिन पछि भेट्न पाउनुहुन्छ,’ नचाहेरै उत्तर दिइन् । मेरो सास फुलेर आयो । जानकीकी छोरीले पनि मेरो प्रश्न दोहोर्याइन् तर नर्स निरुत्तर भइन् तर बल्लतल्ल आवाज निस्कियो, ‘पर्खनुस्, डाक्टर आउँदै हुनुहुन्छ ।’
‘सरी तपाईंकी जानकीलाई बचाउन सकिएन् ।’
‘के भयो डाक्टर नानी ?’ नाति समातेकी हजुरआमाले बच्चा नातिनीको हातमा थमाएर अगाडि पुगिन्।
‘तपाईंहरुले भनेको मान्नुभएन । मैले भनेकै थिएँ, यस्तो अवस्थामा आमालाई बढी खतरा हुन्छ भनेर । उनको चौथो सन्तान भएकोले पाठेघरको अवस्था पनि राम्रो थिएन । त्यसैमाथि हाई प्रेसर र उच्च ज्वरो थियो । अपरेसन गर्न नमिल्ने थियो । औषधि चढाउँदा बच्चा बिग्रिने सम्भावना बढी भए पनि आमालाई बचाउन सकिन्थ्यो । बच्चाले दिशा पिसाब खान सक्छ भनेर तपाईंहरुले मान्नु भएन । जस्तो अवस्था आए पनि अपरेसनका लागि तयार हुनुभयो,’ डाक्टर गम्भीर भइन् ।
‘बच्चा र आमामध्ये एकलाई मात्र बचाउन सकिने अवस्था आयो । जानकीले बच्चा बचाइदिन आग्रह गरिन् । अपरेसन गरियो तर रक्तस्राव रोक्न सकिएन । आमा बेहोस भइन् । अक्सिजनले पनि काम गरेन । जानकीले हामी सबैलाई उछिनिन् । हाम्रो कुनै पनि उपकरण र औषधिले काम गरेन । प्रयास विफल भयो । सरी । डेड बडी केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि पाउनुहुनेछ ।’
काखमा बच्चा लिएकी सानी नानीका आँखा छताछुल्ल भए । आँशुको भेल गाला हुँदै अबोध बालकको अनुहारमा पोखिए । बच्चा चिच्याउन थाल्यो । नानीले आफूलाई थाम्न सकिनन् । बेहोश भइन् । बच्चा हजुरआमाले लड्दालड्दै समातिन् र मुखमा पुलुक्क हेरिन् । चारैतिर सन्नाटा छायो । कोही डाक्टरलाई गाली गर्दै थिए । कोही अस्पताल फुटाल्नुपर्छ भन्दै थिए । जानकीका श्रीमान् भूइँमा थुचुक्क बसे । म भने अबोध बच्चा समातेर मुनालाई भेट्न निस्किएँ ।